Ogeysiiska sharciga ah iyo xaaladaha isticmaalka 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ogeysiiska sharciga ah iyo xaaladaha isticmaalka
Dukumiintiga ayaa dib loo eegay 15 / 05 / 2020
Macluumaadkaaga iyo asturnaantaada ayaa ah muhiimadda ugu weyn ee websaydhkaan waana sababtaas awgeed waxaan kugula talinayaa inaad sidoo kale akhrido Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Magaca shirkadu waa: Jorge Bardales
• Xafiiska diiwaangashan wuxuu ku yaal C / Tórtola n-7 18014 (Granada)
Bixi nuxur laxiriira waxqabadka Suuqgeynta Internetka.
Markaad isticmaaleyso websaydhka emulator.online, Isticmaaluhu wuxuu oggol yahay inaan la qaadin dhaqan kasta oo dhaawici kara sawirka, danaha iyo xuquuqda emulator.online ama dhinacyada saddexaad ama waxyeellayn kara, gabin kara ama culeys badan saari kara emulatorka. khadka tooska ah ama taasi waxay ka hortageysaa, sinnaba, isticmaalka caadiga ah ee shabakadda.
emulator.online waxay qaadataa tallaabooyin nabadgelyo oo macquul ah oo macquul ah si loo ogaado jiritaanka fayrasyada. Si kastaba ha noqotee, Isticmaaluhu waa inuu ogaadaa in tallaabooyinka amniga ee nidaamyada kombiyuutarka ee internetka aan gebi ahaanba la isku halleyn karin sidaas darteedna, emulator.online ma ballan qaadi karto maqnaanshaha fayrasyada ama walxaha kale ee sababi kara isbeddelada nidaamyada kombiyuutarka. (softiweerka iyo qalabka) ee Isticmaalaha ama dukumiintiyada elektaroonigga ah iyo faylalka ku jira.
Keydso, daabacdo iyo / ama u gudbiyo xogta, qoraallada, sawirrada, faylasha, xiriiriyeyaasha, softiweerka ama waxyaabaha kale ee la diidan yahay sida ku xusan qodobbada sharciga ee quseeya, ama in lagu qiyaaso emulatorka. , fisqi, cunsuriyad, ajnabi nacayb ama haddii kale diidmo ama sharci darro ama taas oo sababi karta waxyeello nooc kasta ha ahaato, gaar ahaan qaawan.
Isticmaal ahaan, waxaa lagugu wargaliyay in marin u helka degelkan uusan ka turjumaynin, si uun, bilowga xiriirka ganacsi ee Jorge Bardales qaabkan, isticmaalaha wuxuu ogolaaday inuu adeegsado websaydhka, adeegyadiisa iyo waxyaabaha kujira adigoon ku xadgudbin sharciga hadda, iimaanka wanaagsan iyo kala dambaynta bulshada. Isticmaalka websaydhka ujeeddooyin sharci darro ah ama waxyeelo leh, ama in, si kasta oo ay tahayba, ay u geysan karto waxyeello ama looga hortago howlaha caadiga ah ee bogga waa mamnuuc.
Soo-saaritaankiisa, qaybinta ama wax-ka-beddelkeeda, gebi ahaanba ama qayb ahaan, ilaa ay u oggolaato milkiilayaasheeda sharciga ah;
Jorge Bardales wuxuu dammaanad qaadayaa sir ahaanta xogta shakhsiga ah ee ay bixiyeen USERS iyo daaweyntooda iyadoo la raacayo sharciga hadda jira ee ku saabsan ilaalinta macluumaadka shakhsiga ah, isagoo qaatay heerarka amniga ee sharci ahaan looga baahan yahay ilaalinta macluumaadka shaqsiyeed.
Jorge Bardales wuxuu ballan qaadayaa inuu adeegsado xogta ku jirta feylka "WEB Users AND SUBSCRIBERS", inuu ixtiraamo sirtooda isla markaana u adeegsado si waafaqsan ujeedada laga leeyahay, iyo sidoo kale inuu u hoggaansamo waajibaadkiisa ah inuu badbaadiyo oo uu la qabsado dhammaan tallaabooyinka Si looga fogaado isbeddelka, luminta, daaweynta ama helitaanka aan la oggolaan, iyadoo la raacayo qodobbada Xeerka Boqortooyada ee 1720/2007 ee Diisambar 21, kaas oo oggolaanaya Xeerarka horumarinta Sharciga Dhaqanka 15/1999 ee Diseembar 13, Ilaalinta Xogta Shakhsiyeed.
Boggan internetku wuxuu adeegsadaa habab kala duwan oo macluumaad macluumaad shaqsiyeed ah oo lagu qeexay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah iyo halka loo adeegsado iyo ujeeddooyinka si faahfaahsan looga warbixiyay. Websaydhkan ayaa had iyo jeer u baahan oggolaanshaha hore ee isticmaaleyaasha si ay u socodsiiyaan xogtooda shaqsiyadeed ujeeddooyinka la tilmaamay.
Isticmaaluhu wuu jimicsi karaa, iyadoo la tixraacayo xogta la soo ururiyay, xuquuqda lagu aqoonsaday Sharciga Dhaqanka ee 15/1999, ee marin u helista, hagaajinta ama tirtirka xogta iyo mucaaradka. Si loo adeegsado xuquuqdan, isticmaaluhu waa inuu sameeyaa codsi qoraal ah oo saxeexan oo ay u diri karaan, oo ay la socdaan nuqul ka mid ah aqoonsigooda ama dukumenti aqoonsi oo u dhigma, cinwaanka boostada ee Jorge Bardales (oo ah, C / Tórtola n-7 18014 (Granada)) ama emayl ahaan, ku lifaaqan nuqul ka mid ah Aqoonsiga oo ah: info (at) emulador.online. 10 maalmood kahor, codsiga waa laga jawaabayaa si loo xaqiijiyo fulinta xuquuqda aad codsatay inaad fuliso.
Jorge Bardales wuxuu ogeysiinayaa inay jiraan foomam cabasho oo ay heli karaan dadka isticmaala iyo macaamiisha.
Isticmaaluhu wuxuu sameyn karaa sheegashooyin isagoo codsanaya foomkooda sheegashada ama u diraya emayl info (at) emulador.online oo tilmaamaysa magacaaga iyo magacaaga, adeegga ama badeecada la iibsaday iyo sheegista sababaha sheegashadaada.
Waxaad sidoo kale ku amri kartaa dalabkaaga boostada: Jorge Bardales, C / Tórtola n-7 18014 (Granada) adoo adeegsanaya, haddii aad rabto, foomka dalab ee soo socda:
Loogu talagalay dareenka: Jorge Bardales
E-mayl: faahfaahin (at) emulator.online
Iyadoo la adeegsanayo Xaaladahan Guud, wax xuquuq aqooneed ama mid warshadeed lama siinayo emulatorka shabakada. Khadka tooska ah ee hantidiisa aqooneed ay leedahay Jorge Bardales, taranka, isbadalka, qeybinta, wada xiriirka bulshada, iyadoo la siinayo dadweynaha, soo saarida waxaa si cad looga mamnuucay Isticmaalaha , dib u isticmaal, gudbin ama adeegsi nooc kasta ah, qaab kasta ama habraac, midkoodna, marka laga reebo kiisaska ay sharci ahaan u oggol yihiin ama u oggolaanayo qofka haysta xuquuqda u dhiganta.
Haddii ay dhacdo in isticmaale ama dhinac saddexaad uu tixgeliyo in xadgudub lagu sameeyay xuquuqdooda aqooneed ee sharciyeed sababo la xiriira soo bandhigidda waxyaabaha qaarkood ee Webka, waa inay ku wargeliyaan Jorge Bardales xaaladaha la sheegay ee tilmaamaya:
Jorge Bardales wuxuu diidayaa mas'uuliyad kasta oo ku saabsan macluumaadka laga helo banaanka degelkan, maaddaama hawsha xiriiriyeyaasha muuqda ay kaliya ku wargelinayaan Isticmaalaha jiritaanka ilo kale oo macluumaad ah oo ku saabsan mowduuc gaar ah. Jorge Bardales waa laga saaray dhammaan mas'uuliyadda saxda ah ee u shaqeynta isku xirnaanta noocaas ah, natiijada laga helay isku xirnaanta la sheegay, run ahaanta iyo sharci ahaanta waxa ku jira ama macluumaadka la heli karo, iyo sidoo kale waxyeelada laga soo sheegayo Isticmaalaha. iyadoo la adeegsanayo macluumaadka laga helo websaydhka ku xiran.
Jorge Bardales ma bixinayo wax dammaanad qaad ah mas'uulna kama aha, si kasta oo ay ahaataba, waxyeelada nooc kasta oo ay sababi karto:
Guud ahaan, xiriirka ka dhexeeya emulador.online iyo Isticmaalayaasha adeegyadeeda telematic, ee laga helo websaydhkan, waxay ku xiran yihiin sharciga Isbaanishka iyo awooda iyo maxkamadaha Granada.
Haddii ay dhacdo in isticmaale kasta uu wax su'aal ah ka qabo ogeysiiskan sharci ama faallo kasta oo ku saabsan websaydhka emulator.online, waxay aadi karaan macluumaad (at) emulador.online.
emulator.online waxay xaq u leedahay inay wax ka bedesho, waqti kasta iyo ogeysiis la'aan, soo bandhigida iyo qaabeynta shabakada emulator.online, sida ogeysiiskaan sharciga ah.
Isticmaaluhu wuxuu oggol yahay inaan la qaadin dhaqan kasta oo dhaawici kara sawirka, danaha iyo xuquuqda emulator.online ama dhinac saddexaad ama waxyeellayn kara, curyaamin kara ama culeys ka badin kara emulator.online ama taas oo ka hortegi lahayd, si uun, isticmaalka caadiga ah ee shabakadda.